मेरो पुरानो गार्डले बिजी छु भनी फोन काट्यो, ड्राइभरले फोन उठाएन ! - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com मेरो पुरानो गार्डले बिजी छु भनी फोन काट्यो, ड्राइभरले फोन उठाएन ! - खबर प्रवाह
भ्रष्टाचार रोक्ने लिङ्देनको उपाय : उम्मेदवारलाई मन्दिरमा कसम खुवाउने !
भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर रेनुलाई नै बनाउने प्रचण्डको तयारी, देउवा पनि सकारात्मक
नेपालकी रिया मानन्धर ९८ प्रतिशत अङ्क ल्याएर एसिसिए अध्ययनमा ‘वर्ल्ड टप’ भइन्
काठमाडौ । ब्रिटिश एजुकेशन ग्रुपको द ब्रिटिश प्रोफेशनल कलेजकी विद्यार्थीले वर्ल्ड टप गर्नुभएको छ । कलेजअन्तर्गतको एसिसिए एसोशिएसन अफ चार्टण्ट सर्टिफाइड एकाउन्टेन्ट्मा अध्ययनरत १९ वर्षीय रिया मानन्धरले ९८ प्रतिशत अङ्क ल्याई ट्याकसेसन पेपरमा वर्ल्ड टप गर्नुभएको हो । एसिसिए कार्यक्रम बिश्वकै सबैभन्दा ठूलो र द्रुत अन्तर्राष्ट्रिय लेखा निकाय हो । यसमा यस बर्ष बिश्वका १७९ […]
साउदीमा ४५ सय वर्ष पुरानो राजमार्ग फेला
दुवई । पुरातत्वविद्हरुले ४५ सय वर्ष पुरानो राजमार्ग सञ्जाल फेला पारेका छन् । अष्ट्रेलियाका पुरातत्वविद्हरुले साउदी अरेवियामा ४५ सय वर्ष पुरानो राजमार्ग सञ्जाल फेला पारेका हुन् । वेस्टर्न अष्ट्रेलियाको विश्वविद्यालयका अन्वेषक एवम् पुरातत्वविद्हरुले लामो र फराकिलो अनुसन्धानपछि सो राजमार्ग फेला पारेका हुन् । सो राजमार्ग संरक्षित रुपमा राखिएको प्राचिन चिहानसँग जोडिएको अन्वेषकहरुले बताएका छन् । […]